Nianatra Baiboly tany Frantsa
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
NANANA soavaly i Antoine Skalecki tamin’izy mbola tovolahy ary tsy nisaraka taminy mihitsy ilay izy. Niresaresa tao anaty tionelina maizimaizina izy ireo mba hitatitra arin-tany tao amin’ny toeram-pitrandrahana iray, tany amin’ny 500 metatra any ambanin’ny tany. Tsy maintsy nalefan’ny fianakaviany hanao an’io asa io izy. Mpitrandraka arin-tany mantsy ny dadany nefa nihotsahan’ny tany ka naratra. Niasa adiny sivy isan’andro i Antoine. Efa nianjeran’ny tany koa izy ka saika maty.
Fitaovana nampiasain’ireo Poloney nitrandraka arin-tany sy ilay toeram-piasan’i Antoine Skalecki tany Dechy, akaikin’i Sin-le-Noble
Anisan’ireo Poloney maro teraka tany Frantsa teo anelanelan’ny 1920 sy 1940 i Antoine. Nahoana no nisy Poloney nifindra tany Frantsa? Nahaleo tena indray i Polonina taorian’ny Ady Lehibe I ary lasa be loatra ny mponina tany. Lehilahy frantsay iray tapitrisa mahery kosa no maty tany an’ady ka tsy ampy ny mpitrandraka arin-tany. Nifanaraka àry ny fitondrana frantsay sy poloney tamin’ny Septambra 1919 hoe hafindra any Frantsa ny Poloney sasany. Nahatratra 507 800 ny Poloney tany Frantsa tamin’ny 1931, ary maro no nipetraka tany amin’ny toeram-pitrandrahana tany avaratra.
Nazoto niasa ireo mpifindra monina ireo ary mbola nanaraka ny kolontsainy. Mbola tia nivavaka, ohatra, izy ireo. Hoy i Antoine, izay 90 taona izao: “Rehefa niresaka momba ny Soratra Masina i Joseph dadabeko dia hita hoe tena nanaja azy io. Ny dadany no nampianatra azy ho lasa hoatr’izany.” Nanao ny akanjony tsara indrindra ny fianakaviana poloney rehefa alahady, ary nandeha niangona toy ny efa fanaony tany aminy. Nahasorena ny Frantsay sasany tsy tia fivavahana izany.
Tany Nord-Pas-de-Calais ny Poloney maro no nihaona voalohany tamin’ny Mpianatra ny Baiboly. Nanomboka tamin’ny 1904 ny Mpianatra ny Baiboly no efa nazoto nitory tany. Natao pirinty isam-bolana Ny Tilikambo Fiambenana amin’ny teny poloney, nanomboka tamin’ny 1915. Tamin’ny 1925 kosa ny gazety Fotoam-pahasambarana (Mifohaza! ankehitriny) amin’ny teny poloney no nivoaka. Maro ny fianakaviana poloney tia namaky an’ireo gazety ara-baiboly ireo sy ilay boky hoe Ny Harpan’Andriamanitra amin’ny teny poloney.
Ny dadatoan’i Antoine no nahalalan’izy mianakavy ny Mpianatra ny Baiboly. Niara-nivory voalohany tamin’ny Mpianatra ny Baiboly io dadatoany io, tamin’ny 1924. Tamin’io taona io ny Mpianatra ny Baiboly no nanao fivoriambe voalohany tamin’ny teny poloney, ary tao Bruay-en-Artois ilay izy no natao. Iray volana latsaka taorian’izay, dia tonga tao i Joseph Rutherford, solontena avy any amin’ny foibe. Nanao lahateny ho an’ny besinimaro izy ka 2 000 ny mpanatrika. Nihetsi-po izy nahita hoe Poloney ny ankamaroan’ny mpanatrika, ka hoy izy: “I Jehovah no namindra anareo teto Frantsa mba hianatra ny fahamarinana. Ianareo sy ny zanakareo indray izao no mila manampy ny Frantsay. Mbola be dia be ny olona mila itoriana, ary hataon’i Jehovah izay hisian’ny mpitory hanao izany.”
Dia nataon’i Jehovah Andriamanitra tokoa izany! Nazoto be toy ny rehefa nitrandraka arin-tany ireo Kristianina poloney rehefa nitory. Nisy mihitsy aza nody tany Polonina mba hitory an’ilay fahamarinana sarobidy nianarany. Anisan’izy ireny i Teofil Piaskowski sy Szczepan Kosiak ary Jan Zabuda.
Maro koa anefa ny mpitory poloney nijanona tany Frantsa ary nazoto nitory niaraka tamin’ny rahalahy sy anabaviny tany. Nisy fivoriambe natao tany Sin-le-Noble tamin’ny 1926 ka 1 000 no nanatrika ny fandaharana tamin’ny teny poloney, ary 300 ny tamin’ny teny frantsay. Hoy ny Diary 1929: ‘Nisy 332 no nanokan-tena sy natao batisa nandritra ny taona.’ Ny 32 tamin’ny fiangonana 84 tany Frantsa no niteny poloney, talohan’ny Ady Lehibe II.
Rahalahy sy anabavy poloney tany Frantsa, handeha hamonjy fivoriambe. “Vavolombelon’i Jehovah” no dikan’ilay soratra notazonin’izy ireo
Nampirisihan’ny fanjakana poloney hody ny Poloney tany Frantsa, ka maro ny Vavolombelon’i Jehovah nody tamin’ny 1947. Mbola nisy vokany anefa ny ezaka nataon’izy ireo sy ny mpitory frantsay, satria nitombo 10 isan-jato ny mpitory ilay Fanjakana tany tamin’io taona io. Vao mainka aza nitombo be ny mpitory teo anelanelan’ny 1948 sy 1950. Nanendry mpiandraikitra ny faritra dimy mba hampiofana azy ireo ny biraon’ny sampana tany Frantsa tamin’ny 1948. Poloney ny efatra ary anisan’izy ireo i Antoine Skalecki. Sambany tamin’izay no nanendry mpiandraikitra ny faritra ny sampana tany.
Vavolombelon’i Jehovah maro any Frantsa no mbola mitondra ny anaran’ny Poloney razambeny, izay nazoto nitory sy niasa mafy tany amin’ireo toeram-pitrandrahana. Maro be koa ankehitriny ny mpifindra monina mianatra ny fahamarinana any Frantsa. Nijanona any ny sasany tamin’ireny mpitory ireny na nody. Mbola mazoto mitory ny vaovao tsara foana anefa izy ireo, toa an’ireo rahalahy sy anabavy poloney talohany sy ny mpitory hafa.—Avy any amin’ny tahirintsika any Frantsa.